Niknayman: ၈၈ နေ့ စွဲမှတ်တမ်း
၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံ ဖြစ်လာခြင်း အကြောင်း
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် ဦးနေ၀င်းက တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင်၊ သူ အုပ်ချု့ပ်ခဲ့ သည့် ၂၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်းတွင် အမှားများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ အချိန်အခါ အားလျော်စွာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှု များ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းပြည်သို့ ဝန်ခံလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၅ ရက် နေ့ တွင် ၂၅ ကျပ် ၊ ၃၅ ကျပ် နှင့် ၇၅ ကျပ် တန် ငွေစက္ကူများကို တရားမ၀င်တော့ ကြောင်း နိုင်ငံတော်ကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိန်လွင် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ နိုင်ငံတော်၏ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ရပ်တန့် သွားခဲ့ သော်လည်း၊ တရားမ၀င်ကြေ ငြာခဲ့သော ငွေစက္ကူများအား ပြန်လည်လဲလှယ်ခွင့် မပေးခဲ့ချေ။
စက်တင်ဘာ ၆ ရက် နေ့ တွင် အစိုးရက တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်အားလုံးကို ပိတ်လိုက်သည်။ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ကျောင်းသားများကို နေရပ်အသီးသီးသို့ပြန်ပို့ လိုက်သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် နေ့ တွင် ပြည့်သူ့ လွှတ်တော်က ငွေစက္ကူတန်ဖိုးချ ခဲ့မှုကို သဘောတူ တည်ပြုလိုက် ပြီး ဖျက်သိမ်းခဲ့သော ၂၅ကျပ်၊ ၃၅ ကျပ် နှင့် ၇၅ ကျပ် တန် ငွေစက္ကူများ အစား ၄၅ ကျပ် နှင့် ၉၀ ကျပ်တန် ငွေ စက္ကူများဖြင့် အစားထိုးလိုက်သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် နေ့ တွင် တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်များကို ပြန်လည်ဖွင့် ပေးလိုက်သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် နေ့ တွင် နံနက် ၄ နာရီခွဲခန့် ၌ ရန်ကုန်မြို့သမတ ရုပ်ရှင်ရုံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂-၃ ရက် နေ့ တွင် စစ်တွေဒေသကောလိပ်မှ ကျောင်းသားများ အစိုးရဆန့် ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နေ့ တွင် ပျဉ်းမနား ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် နှင့် တိရစ္ဆ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးကု သရေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများက ဦးနေ၀င်း ဓာတ်ပုံကို မီးရှို့ ၍ ဆန္ဒပြကြသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နေ့ တွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးက ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်း အတည်ပြု ကြေငြာလိုက်သည်။
မတ်လ ၇ ရက် နေ့ တွင် ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ ချက်သံရုံး အပြင်ဘက် ၌ ည ၉ နာရီခွဲခန့် တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ် သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးအောင်ကြီးက စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲရန်နှင့် အစိုးရ အသစ်ဖွဲ့ စည်းရန် အကြံ ပြုထားသည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစားကို ဦးနေ၀င်းထံ ပေးပို့ ခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၂ ရက် နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကြို့ ကုန်းအနောက်ပိုင်း စန္ဒာဝင်းလဘက်ရည်ဆိုင်တွင်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား အချို့ နှင့် အရပ်သားများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြသည်။ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဒဏ် ရာရခဲ့ပြီး ကျန်လူများနှင့် ကျောင်းသားများကို သက်ဆိုင်ရာက ထိန်းသိမ်းလိုက်သည်။
မတ်လ ၁၃ ရက် နေ့ တွင် ကျောင်းသားအား ရိုက်နှက်ခဲ့သူ တရားခံအား သက်ဆိုင်ရာက လွှတ်ပေး လိုက်သ ဖြင့် ကျောင်းသား ၂၀၀ ခန့်ရပ်ကွက်ပြည်သူ့ ကောင်စီရုံးသို့သွားရောက်ကာ ကန့် ကွက်ကြသည်။ ကျောင်း သားများ နှင့် လုံထိန်းများ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားကြပြီး လုံထိန်းများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးခဲ့သည် ။ ရက် အနည်းငယ် အကြာတွင် ကျောင်းသား ၆ ယောက်ခန့် သေ နတ်ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
(ယခုအခါ ကိုဖုန်းမော် သေဆုံးခဲ့ရသော မတ်လ ၁၃ ရက် နေ့ ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ဟု သတ် မှတ်ထားခဲ့ ကြသည်။)
မတ်လ ၁၄ ရက် နေ့တွင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ က အခြားတက္ကသိုလ်များသို့လုံထိန်းများ၏ ကျောင်းသားများ အပေါ် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ငွေစက္ကူများ ဖျက်သိမ်းခြင်း ကို ရှုတ်ချထားသည့် လက် ကမ်းစာစောင်များ ကို ဖြန့် ဝေကြသည်။
မတ်လ ၁၅ ရက် နေ့ တွင် စစ်တပ်မှ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းကို ၀င်စီး လိုက်သည်။ အစိုးရ မှ ကျောင်းသားများ အပေါ် အပြစ်ပုံချထားသည့် ကြေငြာချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။ စက်မှု တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအများအပြား ကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
မတ်လ ၁၆ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများ လှိုင်ကောလိပ်နှင့် စက်မှုတက္ကသိုလ် သို့ပြည်လမ်းမ အတိုင်း ဆန္ဒပြ ချီတက်လာကြသည်။ အင်းလျားကန် အနီးသို့ရောက်သောအခါ လုံထိန်းများ နှင့် စစ်တပ်က ပစ်ခတ် ပိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများစွာ ပစ်သတ်ခံရသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့လုံထိန်းတပ်ဖွဲ့ များ ၀င်ရောက်လာကြသည်။
မတ်လ ၁၇ ရက် နေ့တွင် ကိုဖုန်းမော်၏ အသုဘ သို့ပို့ ဆောင်သင်္ဂြိုဟ်ရန် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသား လူထုက ကြံတောသင်္ချိုင်း အပြင်ဘက်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။ သိုသော် ကိုဖုန်းမော်၏ အလောင်းကို အခြားတစ်နေရာတွင် တိတ်ဆိတ်စွာ သင်္ဂြိုဟ် လိုက်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။ ကိုဖုန်းမော် သေ ဆုံးရသည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းရန် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တစ်ရပ်ဖွဲ့ စည်းလိုက်ကြောင်း အစိုးရကကြေငြာ လိုက်သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်း သား များသမဂ္ဂ ကို ဖွဲ့ စည်းလိုက်သည်။ ကျောင်းသားတစ်ထောင်ခန့် ကို ဖမ်းဆီး၍ အင်းစိန်ထောင်သို့ ပို့ လိုက် သည်။
မတ်လ ၁၈ ရက် နေ့ တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများ ရန်ကုန်မြို့ လယ်ရှိ ဆူးလေဘုရားသို့ချီတက်လာပြီး အခြားကျောင်းသားများနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သည်။ အစိုးရက တပ်မ ၂၂ ၊ ၆၆ ၊ ၇၇ တို့ ကို ခေါ် ယူလိုက်ပြီး ဆန္ဒပြသူများကို ထောင်ပေါင်းများစွာ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်။ ထို့ နေ့ ကို (သွေးစွန်းသော သော ကြာနေ့ ) ဟု လူအများ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး တပ်မှူး ဗိုလ်ချုပ် စိန်လွင်မှာလည်း (ရန်ကုန်မြို့ ၏ လူသတ် သမား) ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းများ နှင့် တက္ကသိုလ်များ အားလုံးကို ပိတ်လိုက်သည်။
ဧပြီလ ၉ ရက် နေ့တွင် အစိုးရက ဖွဲ့ စည်းထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က မတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ သော အဓိကရုဏ်း၌ ကျောင်းသား ၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၆၂၅ ယောက် အဖမ်းခံရကာ ၁၄၁ ယောက်ကိုဆက် လက်ထိန်းသိမ်းထားသည် ဟု ကြေညာသည်။
ဦးအောင်ကြီး မှ ဦးနေ၀င်း ထံသို့စာမျက်နှာ ၄၀ ပါသော အိပ်ဖွင့်ပေးစာကို ရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
မေလ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် နယ်စပ်ဒေသများတွင် ညှဉ်းပန်းမှု၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှု၊ အ မျိုးသမီးများအား အဓမပြုကျင့်မှု နှင့် ရွာသားများအား ပေါ်တာအဖြစ် အတင်း စေခိုင်းကာ လူမျိုးစု သူပုန် များ ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် (လူသားမိုင်းရှင်း ကိရိယာ) အဖြစ်အသုံးပြုမှု များအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း အပြည် ပြည် ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ က ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
မေလ ၃၀ ရက် နေ့တွင် ကျောင်းများပြန်ဖွင့် ခဲ့သော်လည်း ကျောင်းတက်သော ကျောင်းသားဦးရေမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း အတွင်း၌ အစိုးရဆန့် ကျင်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြန် လည် ဖြန့် ဝေကြသည်။ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားများ၏ ထောင်တွင်း ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံ အတွေ့ အကြုံ များ နှင့် ကျောင်းသူများ အား လုံထိန်းများ၏ အဓမ္မ္မကျင့်မှု သတင်းများကိုလည်း ပျံ့ နှံ့ သွားခဲ့သည်။
ဇွန် ၈ ရက် နေ့တွင် ဦးအောင်ကြီး မှနောက်ထပ် အိပ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို ဦးနေ၀င်းထံသို့ပို့ခဲ့ပြန်သည်။ ယခုစာတွင် စီးပွားရေး ၊ နိုင်ငံရေး ပြသနာများ အပြင် မတ်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှုများကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ဇွန်လ ၁၃ ရက် နေ့တွင် မတ်လတွင် အသတ်ခံရသူများအတွက် အောက်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနား ကျင်းပရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ မတ်လ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များ ကို ဇွန်လ ၁၇ ရက် နောက်ဆုံးထား ပြီး မ ထုတ် ပြန်ပေးပါက ပြသနာများ ပိုမိုကြီးထွား လာလိမ့်မည်ဟု ကျောင်းသားများက ရာဇသံ ပေးလိုက်သည်။
ဇွန်လ ၁၅ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ အစည်းဝေးပွဲများ ဆန္ဒပြ ပွဲများ စတင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ဇွန် ၁၆ ရက် နေ့ တွင် ကိုမောင်မောင်ကျော် ၊ ကို မိုးသီးဇွန် တို့ ၏ ဟောပြောပွဲများ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း များ အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။
ဇွန်လ ၁၇ ရက် နေ့ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွင်းမှသင်တန်းများ အားလုံးရပ်စဲလိုက်သည်။ဆန္ဒပြပွဲများဟော ပြောပွဲများ ပြည်လမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ရောက်သွားခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက် နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့ တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများ နှင့် ပြည်သူများငြိမ်း ချမ်း စွာဆန္ဒ ပြကြသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်း အတွင်းရှိ စည်းဝေးပွဲများသို့သံဃာတော်များပါ တက်ရောက် လာကြသည်။ အစည်းအဝေးပွဲများမှ - ကျောင်းထုတ်ခံရသော ကျောင်းသားများကို ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေး ရန် နှင့် မတ်လအတွင်း သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူများကို ဖော်ထုတ် အပစ်ပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကို ရဲ နှင့် စစ်တပ်က ညနေ ၆ နာရီတွင် ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ လိုက်သည်။
ဇွန်လ ၂၁ ရက် နေ့တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများက ပြည်လမ်းရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ရန် ကုန်မြို့ လယ်သို့ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။ ဟံသာဝတီလမ်းဆုံ အရောက်တွင်လုံထိန်းများ က မျက်ရည်ယို ဗုံးများ ၊ သေနတ်များဖြင့် စတင် ပစ်ခတ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများကလည်း ဂျင်ကလိ များ ဖြင့် ပြန်လည် ပစ်ခတ်ကြသည်။ အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားပြည်သူ ၈၀ ခန့် နှင့်လုံထိန်း ၂၀ ခန့်သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ အစိုးရအာဏာပိုင်များက ဇွန်လ ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ထိလူစုလူဝေး ပြုလုပ်ရန် နှင့် ညနေ ၆ မှ နံနက် ၆ နာရီ အထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် များ နှင့် သွားဘက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် များ အားလုံး ပိတ်လိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၁ ရက် နေ့ တွင် အစိုးရမှ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ည၈ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီိ သို့ပြင်ဆင်လိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၇ ရက် နေ့ တွင် မဆလ ပါတီ၏ အရေးပေါ်ညီလာခံကို ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ မတ်အတွင်း ဖမ်းဆီးထားခဲ့သော ကျောင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဟု လည်းကြေ ညာခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၉ ရက် နေ့ တွင် ညမထွက်ရအမိန့် ကို ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ကျောင်းထုတ်ခံရသောကျောင်း သား များလည်း သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် အသီသီးတွင် ကျောင်းပြန်ခွင့်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၁၈ ရက် နေ့တွင် မတ်လအတွင်း ဖြစ်ခဲ့သော အဓိကရုဏ်းတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သော ဆန္ဒပြသူများ ၄၁ ဦး သည် ထောင်ကားပေါ်တွင် အသက်ရှုကျပ်ကာ သေဆုံးခဲ့မှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးမင်းခေါင်က ၀န်ခံပြောကြားပြီး ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားသည်။
ဇူလိုင် ၂၂ ရက် နေ့တွင် ပြည်မြို့ ၌ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်အားလုံးကိုတပ် မတော်သို့လွှဲပေးလိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၂၃ ရက် နေ့တွင် မဆလ ပါတီ အရေးပေါ် ညီလာခံကို ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ဥက္ကဌ ဦးနေ၀င်းက မိန့်ခွန်း ပြောကြားပြီး သူ နှင့်အတူ မဆလပါတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးစန်းယု၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးကို၊ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိန်လွင်၊ ဗဟိုကော်မတီ အလုပ်အမှုဆောင်ဝင်များ ဖြစ်သည့် ဦးကျော်ထင် နှင့် ဦးထွန်းတင်တို့အနားယူတော့မည် ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်ပါတီစနစ် သို့ မဟုတ် ပါတီစုံစနစ် ကျင့်သုံး ရန် လည်း အဆိုတင်သွင်းလိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၂၆ ရက် နေ့ တွင် မဆလပါတီ ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းက၍ ဦးစိန်လွင်အား ပါတီ ဥက္ကဌ သစ် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သည်။ ဦးစန်းယုအား ပါတီမှ နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုသော်လည်း ဦးကျော်ထင်၊ ဦးအေးကို နှင့် ဦးထွန်းတင် တို့ ကို ပြန်လည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်ခ နှင့် ပြည်သူ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးမြင့်မောင် တို့ ကို ရာထူးမှ ပယ်ရှားလိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၂၇ ရက် နေ့တွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပ၍ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ဥက္ကဌ နှင့် နိုင် ငံ တော် သမတ အဖြစ် ဦးစိန်လွင် ကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်သည်။ ဦးထွန်းတင်အား နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီး ချုပ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဦးကျော်ထင်အားနိုင်ငံတော်ကောင်စီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒေါက်တာ မောင်မောင်အား နိုင်ငံတော် ပြည်သူ့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင် ဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် လိုက်ကြသည်။
ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်တွင် ကျောင်းသားများ နှင့် ပြည်သူလူထူများ ဆန့် ကျင်ဆန္ဒပြ ရန် စုရုံးကြသည်။ မြေထဲမြို့( အောင်လံ မြို့ ) တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်လိုက်သည်။
ဇူလိုင် ၂၉ ရက် နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်အပြင်ဘက်တွင်ကျောင်းသားများဆန္ဒပြ ကြသည်။ဦးအောင်ကြီး၊ သတင်းထောက် ဦးစိန်ဝင်း နှင့် အခြား အငြိမ်းစား စစ်ဘက် အရာရှိ ၉ ဦး အဖမ်းခံရသည်။
သြဂုတ် ၁ ရက် နေ့ တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ ချုပ်က သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ တွင် တနိုင်ငံလုံး အထွေထွေသပိတ်ကြီး ဆင်နွဲရန် လှုံ့ ဆော်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့် ဝေကြသည်။
သြဂုတ် ၂ ရက် နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်၌ ကျောင်းသားများ အစည်းအဝေးကျင်းပကာ ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ကြသည်။
သြဂုတ် ၃ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၌ မာရှယ်လော စစ်ဥပဒေကို ညနေ ၆ နာရီ တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာ သည်။ ထိုအမိန့် ကို ဖီဆန်၍ လူတစ်သောင်းခန့်မြို့ တွင်းသို့လှည့်လည်ဆန္ဒပြကြသည်။
သြဂုတ်လ ၅ ရက် နေ့ တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည်။ စစ်ဥပဒေ ကို ဖီဆန်မှုဖြင့် ပြည်သူ လူထု ရာပေါင်းများကို ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက် နေ့ တွင် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မြို့ များတွင် လည်း ဆန္ဒပြပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရေနံချောင်း ၊ သနပ္ပင် နှင့် ပဲခူး မြို့ တို့ တွင် ညမထွက်ရ အမိန့် များ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သြဂုတ် ၈ ရက် နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ လမ်းမပေါ် နေရာတိုင်း၌ လူတန်းစား ပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အထွေထွေ သပိတ်ကြီး ကို ဆင်နွဲကြသည်။ တနိုင်ငံလုံးရှိ ဆန္ဒပြလူထုကြီးက ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး ရရှိရေး ရရှိ ရန်၊ မဆလ ပါတီနှုတ်ထွက်ပေးရန်နှင့် ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ် အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးရှိ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်တွင်လည်း ဆန္ဒပြပွဲများ တပြိုင်တည်းကျင်းပ ကြသည်။
ဆန္ဒပြသူများ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ တွင် စုဝေးကြသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းမှုး ဗိုလ်မှုးချုပ်မျိုးညွန့် က လူစုခွဲရန် အသံချဲ့ ဖြင့် သတိပေးသည်။ လူထုကြီးက ဆက်လဲရှိမြဲအတိုင်း ရှိနေသဖြင့် ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် တပ်သားများ က မြို့ တော်ခန်းမ အပြင်ဘက်ရှိ ဆန္ဒပြနေကြသူ လူအုပ်ထဲသို့သေနတ်များဖြင့် စတင်ပစ်ခတ်ကြသည်။
သြဂုတ် ၉ ရက် နေ့တွင် တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တပ်မ ၂၂ မှ စစ်သားများက ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ဆန္ဒပြ လုထုကို ပစ်ခတ်ကြသည်... ပြည်သူလူထု ရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ပြီး ထောင်ပေါင်းများ စွာ အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ကျောင်းများအားလုံးပိတ်လိုက်သည်. ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ ၁၀ ရက် နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ဆန္ဒပြသူများအား စစ်သားများက ဘရင်းကယ်ရီယာများ ပေါ်မှ ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ဆန္ဒပြသူ အမြောက်အမြား သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်းသို့ စတင်ပစ်ခတ် ခဲ့ သည်။ မြောက်ဥက္ကလာပတွင် ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီး က ရဲအချို့ အား ပထမဆုံးအကြိမ် ခေါင်းဖြတ် သတ်လိုက်ကြသည်။
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် နေ့ တွင် ဦးစိန်လွင် သမတ ရာထူးမှ ဆင်းပေးရသည် ။ ပြည်သူများ လမ်းမပေါ်ထွက်၍ သံပုံးများတီးကာ ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်ကြသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် သေနတ်ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ပြည့်နှက် လျက် ရှိသည်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက် နေ့ တွင် ဒေါက်တာမောင်မောင်အား မဆလပါတီ၏ ဥက္ကဌသစ် အဖြစ်ခန့်ထားလိုက် သည်။ ပြည်သူ့ တရားသူကြီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးတင်အောင်ဟိန်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်သူ့ ဆန္ဒလေ့လာရေးကော်မ ရှင် ကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်က ဖွဲ့ စည်းလိုက်သည်။
သြဂုတ် ၂၀ ရက် နေ့တွင် ဆန္ဒပြသူများက ဒေါက်တာမောင်မောင်၏ အစိုးရသစ် နှုတ်ထွက်ပေးရန် ၊ အထွေ
ထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးရန် နှင့် ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုကြသည်။
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက် နေ့ တွင် မာရှယ်လော စစ်ဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းလိုက်သည်။ ဒေါက်တာမောင်မောင်က တစ်ပါတီစနစ် သို့ မဟုတ် ပါတီစုံစနစ် ကျင့်သုံးရန် အတွက် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်ပေးရန် ကတိပြုလိုက် သည်။
သြဂုတ်လ ၂၆ ရက် နေ့ တွင် ရွှေတိဂုံစေတီတော် အနောက်မုခ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထောင်ပေါင်း များစွာသော လူထုကြီးအား မိန့် ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကြောင့် သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများအားလုံး ရပ်ဆိုင်သွားခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်း အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာတနိုင်လုံးရှိ ထောင်အသီးသီးတွင် အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်. အကျဉ်းသား ၉၀၀၀ ခန့် လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက် နေ့ တွင် ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန စစ်ဦးချုပ်ဟောင်း ဦးတင်ဦး ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ရှေ့ တွင် မိန့် ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက် နေ့ တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ္ဂကို ဖွဲ့ စည်းတည်ထောင်လိုက် သည်။ မင်းကိုနိုင်အား ဥက္ကဌ အဖြစ်ရွေးချယ် တင်မြှောက်ကြသည်။ ဦးနု က ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ချုပ် ( ဒီ ၊ ငြိမ်း ) ကို တည်ထောင်လိုက်သည်။
(ဆန္ဒပြပွဲများ နေ့ စဉ်ရက်ဆက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အစိုးရက လမ်းမပေါ်ရှိ ဆန္ဒပြပွဲများ နှင့် အစည်းဝေးပွဲများကို ပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။)
စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် နေ့ တွင် ကုန်သွယ်ဝန်ကြီးဌာန ပေါ်မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သော စစ်သား နှစ်ဆယ့် လေးဦး လက်နက်ချလိုက်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဆောက်အဦးကို ရဟန်းပျိုသမဂ္ဂ နှင့် ကျောင်းသား များက သိမ်းလိုက်သည်။ အစိုးရ က နှုတ်ထွက်ပေးရန် နှင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် ဆန္ဒပြမှုများ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ကျောင်းသားများ စတင်၍ တောခိုကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် နေ့ တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်က စစ်တပ်မှ အာဏာကို လွှဲပြောင်းရယူလိုက်ပြီး နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အပြင်မထွက်ရ အမိန့် ကို ဆန့် ကျင်ကြသည်။စစ်တပ်မှ ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်ခဲ့ သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် နေ့ တွင် ဆန္ဒပြသူများ နှင့် စစ်တပ် တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြို့ ပေါ်ရှိ ပြောက်ကျားများ က ရန်ကုန်မြို့ လယ်ရှိ မိုက်ကရိုဝေ့ ကြေးနန်းတိုင် အား ဒုံးကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ နှင့် အခြား အာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် နေ့ တွင် ဦးအောင်ကြီး ၊ ဦးတင်ဦး နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ က အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲချုပ်ကို ဖွဲ့ စည်းလိုက်သည်။
Posted by Niknayman at 6:57 PM